Lacag dhan 58 milyan oo loogu talagalay deeqaha dibad ku cuntaynta iyo maaweelada ayaa ka caawin doonta ganacsiyadu inay u diyaargaroobaan COVID Normal iyada oo la abuurayo goobaha cuntaynta.
Deeqahaan ayaa waxaa heli kara ganacsiyada martigelinta sida makhaayadaha, kofeeyada, baababka/taverns-ka
Ganacsatada xaqa u leh ayaa dalban kara deeq dhan $5,000 oo lagu bixiyo qalabka, tababarada iyo wixii la xiriira suuqgeynta cusub ama ballaarinta dibad baxa hadda jira ee ku cuntaynta iyo maaweelada.
Third round of the Business Support Fund — Somali
Ganacsiyada guryaha Fiktooriya ee ka baxsan Degmada Melbourne
Ganacsiyada leh shaqaalaha
Ganacsiyada ka diiwaan gashan WorkSafe
Ganacsiyada haysta Class 2 or 3 Service Sector Certificate of Registration (Class 2 iyo Shahaadada qaybta Diiwaanka Adeega) oo aan weli dhicin sida waafaqsan Food Act 1984 (Vic) iyo/ama laysanka hadda ah ee khamrada
Ganacsiyda xaqa u leh waxaa waajib ku ah iyagana inay buuxiyaan shuruudaha barnaamijyada ee lagu taxay barnaamijka bogga ku yaal Business Victoria website
Ganacsiyada Degmada Melbourne xaq uma laha sida waafaqsan barnaamijkaan. Waxaa lagu taageeraa deeqo ka yimid Degmada Melbourne ( Melbourne City Recovery Fund)
Waa immisa deeqaha lagu bixinayo barnaamijkan?
Ganacsiyada xaqa u leh ayaa heli doona deeq dhan $5,000.
Sidee deeqaha dadka la siinayo ay u kharajgaraynayaan?
Deeqaha waxaa laga yaabaa in lagu bixiyo waxyaallaha ay ka mid yihiin:
qalabka dibada ee cuntaynta sida miisaska iyo kuraasta, iskiriinka amaanka iyo daladaha
tababarida kuwa leh goobta iyo shaqaalaha si ay u buuxiyaan heerka amaanka ee COVID-19
Shaqo sahlan oo korontada sida rakibida nalal dibada ah iyo fiishka korontada (power points).
Maxaa caddayn ah oo dalbadayaashu u baahan yihiin inay bixiyaan?
Waxaa waajiba inaad keento
Nambarka Shaqaalaha ee workcover-kaaga
Shahaadaada hadda ah ee Diiwaangelinta Golaha Degmada sida waafaqsan Food Act 1984 (Vic)
Laysankaaga khamrada ee hadda ah, haddii aad iibso khamro.
Sidee u dalbanayaa?
Waxaa waajiba inaad ka soo gudbisid dalabka online adoo gelaya Business Victoria website
Dhamaan su’aallaha ku yaalla application form ka waa in la buuxiyo dukumintiyada la codsaday waa in la xaqiijiyaa in lagu soo lifaaqo wakhti ku filan si loo hubiyo qiimaynta loona bixiyo deeqda.
Macluumaadka aan dhamaystirnayn ama khaladka ah waxaa laga yaabaa in daahiyidi ku timaado, xaalladaha qaarkood, qiimayn aanu xaq loo lahayn.
Goorma ayaa la xirayaa dalabyada?
Dalabyada waxaa la xiri doonaa marka lacagtu dhamaato ama 11.59 ee habeenimo, 11ka Diseembar 2020, hadba kan soo horma
Xaggee ka heli karaa macluumaad siyaada ah ama caawimada dalabkayga?
Caawimaaad intaas ka badan contact us ama wac Khadka Business Victoria oo ah 13 22 15.
Haddii aad u baahan tahay turjubaan, wac adeegyada afcelinta iyo tarjumida qoraalka (TIS National) tel: 13 14 50 weydiina Business Victoria Khadka ganacsiga Fiktooriya oo ah (13 22 15). Adeegaan waxaa heli kara qof walba ama urur ku sugan Australiya oo u baahan adeegyada afcelinta iyo tarjumida qoraalka.
Ma jiraan barnaamijyo kale oo kaalmayn ah oo ay heli karaan ganacsiyada reer Fiktooriya.
Xukuumada reer Fiktooriya barnaamijkeeda Business Resilience Package waxaa ka mid ah barnaamijyada kaalmada ee ganacsiyada ay saamayeen xanibaadyadu si loo xaqiijiyo hoos u dhigida fiditaanka coronavirus (COVID-19)
Ganacsiga Fiktooriya coronavirus (COVID-19) Business Information Page wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan kaalmooyinka kale iyo macluumaadka ganacsiyada